Guam yigharịrị ịmaliteghachi njem maka Japan, South Korea & Taiwan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Guam yigharịrị ịmaliteghachi njem maka Japan, South Korea & Taiwan
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Guam • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • LGBTQ • News • Mgbasa Ozi • Iwughachi • Safety • Akụkọ South Korea na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Amlọ Ọrụ Gọọmentị Guam
Na-ebute nchekwa nke ndị bi na agwaetiti na ndị njem, Guam Visitors Bureau (GVB) ekwuputala na imeghachi njem na July 1, 2020 n'ime Guam maka mba Japan, South Korea, na Taiwan ka eyigharịrị ruo oge ọzọ.
Gọvanọ Lou Leon Guerrero kwuru, "N'ihi mmụba a na-adịbeghị anya n'okwu ikpe na maka nchegbu maka nchekwa na ọdịmma nke agwaetiti anyị, anyị ekpebiela na ọ kacha mma ịhapụ yigharịa anyị," “Guam ejirila izu ole na ole gara aga wee mepụta usoro iwu ahụike dị mkpa maka ndị bi na ndị ọbịa. Ọ bụ ezie na anyị ga-eyiri ihe mkpuchi anyị na ebe ndị ọzọ, anyị ka nwere ike ịkekọrịta mmụọ Håfa Adai. Anyị nile nọkọtara ọnụ — ọ bụ nanị ụkwụ isii n'ibe ha. ”
Iwu mgbochi nke ụbọchị 14 na nyocha nke achọrọ ka dịịrị ndị njem niile na-abanye n'àgwàetiti ahụ.
“Ọ dịla mgbe ọ bụla na ọ bụrụ na ihe agbanwee, anyị ga-agaghachi na ụbọchị mmeghe anyị. Achọrọ m ịkele ahia njem anyị na ndị ọrụ ụlọ ọrụ maka inye anyị oge iji nweta ụlọ anyị ka anyị niile wee nwee ike ịnụ ụtọ agwaetiti anyị mara mma n'oge ọzọ, "GVB President & CEO na onye bụbu Gọvanọ Carl TC Guiterrez kwuru. "Ọ bụ ihe ziri ezi ị yigharị maka nchekwa nke onye ọ bụla, mmụọ na-arịwanye elu nke ndị njem chọrọ ịbịa n'agwaetiti anyị na-agba anyị ume."